Umjikelo wobomi wophuhliso lwesoftware-sdlc
Eyona Qa Isoftware yoPhuculo lweSoftware-SDLC
Isoftware yoPhuculo loBomi, okanye i-SDLC yinkqubo esetyenziselwa ukwenza isoftware. Kukho amanqanaba ahlukeneyo okanye amanqanaba ngaphakathi komjikelo wobomi wophuhliso lwesoftware nakwisigaba ngasinye, imisebenzi eyahlukeneyo iyenzeka.
I-SDLC yenza ulwakhiwo lwamaqela ophuhliso ukuze akwazi ukuyila, ukudala kunye nokuhambisa isoftware ekumgangatho ophezulu ngokuchaza imisebenzi eyahlukeneyo ekufuneka yenzekile Umjikelo wobomi uchaza indlela yokuphucula umgangatho wesoftware kunye nenkqubo yophuhliso iyonke.
Injongo yenkqubo ye-SDLC kukunceda ukuvelisa imveliso eyonga iindleko, esebenzayo, kunye nomgangatho ophezulu.
Inkqubo yoPhuculo loBomi beSoftware iqala ngenqanaba lohlalutyo lweemfuno, apho abachaphazelekayo baxoxa ngeemfuno zesoftware ekufuneka iphuhlisiwe ukufezekisa injongo. Injongo yesigaba sohlalutyo lweemfuno kukufaka iinkcukacha zemfuno nganye kunye nokuqinisekisa ukuba wonke umntu uyayiqonda indawo yomsebenzi kunye nendlela eza kuzalisekiswa ngayo imfuno nganye.
Yinto eqhelekileyo ukuba uxoxe ngendlela imfuneko nganye eza kuvavanywa ngayo kwaye ke abavavanyi banokongeza ixabiso elikhulu ekuthatheni inxaxheba kwiintlanganiso zohlalutyo lweemfuno.
Kuxhomekeke ekubeni yeyiphi indlela yophuhliso lwesoftware esetyenzisiweyo, iindlela ezahlukeneyo zithathwa ukusuka kwinqanaba elinye ukuya kwelinye. Umzekelo, kwimpophoma okanye kumfuziselo we-V, isigaba sohlalutyo lweemfuno sigcinwa kuxwebhu lwe-SRS (isiCaciso seMfuneko yeSoftware) kwaye kufuneka sigqitywe ngaphambi kokuba inqanaba elilandelayo lenzeke.
Inqanaba elilandelayo le-SDLC linqanaba loyilo. Ngexesha lesigaba sokuyila, abaphuhlisi kunye nabayili bezobuchwephesha baqala uyilo olukumgangatho ophezulu wesoftware kunye nenkqubo ukuze bakwazi ukuhambisa imfuno nganye.
Iinkcukacha zobuchwephesha zoyilo kuxoxwa ngazo nabachaphazelekayo kunye neeparameter ezahlukeneyo ezinjengeengozi, ubuchwepheshe obuzakusetyenziswa, amandla eqela, iingxaki zeprojekthi, ixesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali ziyaqwalaselwa emva koko kukhethwe eyona ndlela yoyilo ilungileyo yemveliso.
Uyilo olukhethiweyo loyilo, luchaza onke amacandelo ekufuneka ephuhlisiwe, unxibelelwano neenkonzo zomntu wesithathu, ukuhamba komsebenzisi kunye nonxibelelwano lwedatha kunye nokumelwa kwabaphambili kunye nokuziphatha kwento nganye. Uyilo luhlala lugcinwa kuXwebhu loCaciso loYilo (i-DSD)
Emva kokuba iimfuno kunye nomsebenzi woyilo ugqityiwe, inqanaba elilandelayo le-SDLC kukuphunyezwa okanye ukuphuculwa kwesoftware. Kweli nqanaba, abaphuhlisi baqala ukufaka iikhowudi ngokweemfuno kunye noyilo ekuxoxwe ngalo kwizigaba ezidlulileyo.
Abaphathi beenkcukacha zedatha benza idatha efunekayo kwisiseko sedatha, abaphuhlisi bangaphambili benza iindawo ezifanelekileyo kunye ne-GUI yokunxibelelana nesiphelo sasemva konke kusekwe kwizikhokelo kunye neenkqubo ezichazwe yinkampani.
Abaphuhlisi bakwabhala iimvavanyo zeeyunithi zecandelo ngalinye ukuvavanya ikhowudi entsha ebhaliweyo, ukuphonononga ikhowudi yomnye nomnye, ukwenza ukwakha kunye nokuhambisa isoftware kwimeko. Lo mjikelo wophuhliso uyaphindaphindwa de kuhlangatyezwane neemfuno.
Ukuvavanywa linqanaba lokugqibela kumjikelo wobomi wophuhliso lwesoftware ngaphambi kokuba isoftware inikezelwe kubathengi. Ngexesha lovavanyo, abavavanyi abanamava baqala ukuvavanya inkqubo ngokuchasene neemfuno.
Abavavanyi bajolise ekufumaneni iziphene ngaphakathi kwinkqubo kunye nokuqinisekisa ukuba isicelo siziphatha ngendlela elindelweyo kwaye ngokwento ebhaliweyo kwisigaba sovavanyo lweemfuno.
Abavavanyi banokusebenzisa iskripthi sovavanyo ukwenza uvavanyo ngalunye kwaye baqinisekise iziphumo, okanye basebenzise uvavanyo lokuhlola olona hlobo lusekwe kumava.
Kungenzeka ukuba iziphene zichongiwe kwisigaba sokuvavanya. Nje ukuba kufumaneke isiphene, abavavanyi bazisa abaphuhlisi malunga neenkcukacha zomcimbi kwaye ukuba sisiphene esivumelekileyo, abaphuhlisi baya kulungisa kwaye benze inguqulelo entsha yesoftware efuna ukuqinisekiswa kwakhona.
Lo mjikelo uyaphindaphindwa de kuvavanywe zonke iimfuno kwaye zonke iziphene zilungisiwe kwaye isoftware ikulungele ukuthunyelwa.
5. Ukuthunyelwa nokuGcinwa
Nje ukuba isoftware ivavanywe ngokupheleleyo kwaye akukho imiba ephambili ngokubaluleka hlala kwisoftware, lixesha lokuhambisa kwimveliso apho abathengi banokusebenzisa inkqubo.
Nje ukuba uguqulelo lwesoftware lukhutshwe kwimveliso, kuhlala kukho iqela lesondlo elijonga nayiphi na imiba ephathelene nemveliso.
Ukuba umba udibana nemveliso iqela lophuhliso liyaziswa kwaye kuxhomekeke ekubeni umbi kangakanani umba, unokufuna ukulungiswa okushushu okwenziweyo kwaye kuthunyelwe ngexesha elifutshane okanye ukuba akunzima kakhulu, kunokulinda kude kube luhlobo olulandelayo lwesoftware.
Onke amanqanaba kumjikelo wobomi wophuhliso lwesoftware achazwe apha ngasentla ayasebenza kuyo nayiphi na indlela yophuhliso lwesoftware, kodwa ubude kunye nemisebenzi kwisigaba ngasinye zixhomekeke ekubeni uyayilandela indlela yohlobo lweV Model okanye iAgile.
Kwi-Agile, ixesha lokuhambisa isoftware esebenzayo iphakathi kwe-2 ukuya kwi-4 iiveki kwaye ke ezi zigaba zilapha ngasentla zifinyeziwe. Kwakhona kwi-agile, yindlela yonke yeqela apho abaphuhlisi kunye nabavavanyi babandakanyeka kwaye basebenza kunye ukwenza imveliso ekumgangatho ophezulu.
iisamsung ngolwesiHlanu zijongana ne2020
I-Samsung Galaxy A22 5G efikelelekayo ngokumangalisayo isesikrinini esikhulu kunye nebhetri enkulu
Ungazitshintsha njani ngokulula ii icon zeapps kwi Android
I-Spigen Neo Hybrid EX Case ye-Apple iPhone 6 yoVavanyo
Yikholwe okanye ungakholelwa, iApple & apos ye-iPhone 11 isimahla ngoku kwi-Best Buy ngezavenge